Gated Zvemukati: Gedhi rako reGood B2B Inotungamira! | Martech Zone
Gated Zvemukati: Gedhi rako reGood B2B Inotungamira!
Mugovera, December 19, 2020 Mugovera, December 19, 2020 Madhavi Vaidya
Gated zvemukati zano rinoshandiswa nemakambani mazhinji eB2B kupa zvirinani uye zvinehunhu zvemukati kuti uwane mamwe mafambiro akanaka mukutsinhana. Gated zvemukati hazvigone kuwanikwa zvakananga uye munhu anogona kuzviwana mushure mekuchinjana rumwe ruzivo rwakakosha.
80% yeB2B yekushambadzira midziyo yakavharirwa; sezvo gated zvemukati zvine hungwara kune B2B inotungamira makambani ekugadzira.
Izvo zvakakosha kuti uzive kukosha kwezvine gated zvemukati kana iwe uri B2B bhizinesi uye yakadai yakakwira nhanho asset zvechokwadi inokodzera zvinopfuura kungotaura chete. Nekudaro heino chinyorwa chakakumikidzwa kune iyi yakakosha asset iyo inokwanisa kukanganisa kunaka kwe mutungamiri wechizvarwa yemakambani eB2B.
Gated zvemukati zveyese inbound tsika ndeye mahara; zvinongowanikwa chete kupesana nekuchinjana ruzivo. Icho chaicho chikonzero chekuvanza zvemukati ndechekugadzira zvinotungamira. Kana mushandisi auya kune webhusaiti uye ave kuda kurodha aseti; ndizvo zvinokumbira mushanyi kuti azadze fomu. Iyi fomu yakakosha ruzivo kune mushambadzi kuti atore kutungamira. Kutungamira uko kunoshuvira zvakakwana kurodha pasi chinhu kunogona kunge kuri kwakanaka kutungamira.
Saka heano chaiwo mabhenefiti ezve gated zvemukati:
Inowedzera mikana yako yekutora yakanaka inotungamira
Kunonatsiridza kutengesa kunogadzirwa kuburikidza nekutungamira
Ngatizive iwe mutengi wako zvirinani nekukupa iwe mukana wekuti uve neruzivo rwakanakisisa nezve mutengi
Gated zvemukati zvinotarisira kukupa iwe iri nani kubata uye nekuwedzera kutonga pamusoro pekuziva vatengi vako kana kuziva zvakawanda nezvevashanyi vako. Gated zvemukati zvine zvakare kukanganisa kwayo sekunge uine shoma SEO mabhenefiti, mukana wekutyaira tarisiro yako kure newebsite yako, hapana chinoonekwa chiratidzo chiratidzo kumushandisi wako chingadai chakavabatsira kuti vanzwisise zvauri, kana kuva neashoma peji maonero kana kunyangwe kupera kwetraffic
Gated zvemukati zvinofanirwa kushandiswa zvine hungwaru kana iwe uine mamwe marongero munzvimbo uye iwe unogona achiri panjodzi yekurasikirwa nevamwe vashanyi. Nekudaro, zvinogona kuratidza kuve zvinobatsira kuwana yakanaka lead, nekuti mumwe munhu anonyatsoda kuziva nezve iyo mhando kana anoda zvemukati, uye zvakare anodawo mamwe masevhisi angangodaro angango chinjana ruzivo newe.
Saka ndedzipi mienzaniso yezvinyorwa zvine gated iwe zvaunogona kuendesa kune yako webhusaiti netariro yekuwana yakanaka inotungamira?
Heino tariso yekukurumidza pane mamwe akanakisa mafomu ezvinyorwa gated:
eBook - Yakakurumbira pakati pevashanyi; e-bhuku igwara rinokwanisa kukupa iwe ruzivo rwechokwadi pane imwe nyaya yenyanzvi. Inogona kunge iri muchimiro chegwara rakapfupika iro rinogona kubatsira kuvaka chiziviso chiziviso uye chiremera chechiremera; ichichiita chakakwikwidza chakasimba kuve imwe yemhando dzakanakisa dzegate zvemukati.
Whitepapers - Imwe fomu inozivikanwa yezvinhu zvine magedhi- Mapepa matsamba emhando yakanaka kwazvo yezvinhu zvine magedhi. Icho chidzidzo chehunyanzvi pachacho uye chinogona kupa ruzivo rwechokwadi pamusoro penyaya ipi yakanyorwa nezvayo. Mapepa matsamba anozivikanwa sezvo ari akavimbika sosi yezvakanaka zvemukati uye anogona kubatsira kukumisikidza iwe semafunga mutungamiri. Gated zvemukati zvinogona kuita sosi yakanaka yekutungamira kwakanaka sezvo inogona kuita kuti vanhu vazhinji vavimbe newe uye vade kurodha rako whitepaper ruzivo.
WEBINAR - Webinar ndeimwe muenzaniso wezvakanaka zvemukati zvemukati. Chinhu chikuru kutora-kure kwevashanyi vanoda kutora chikamu uye kusangana newe. Aya marudzi emabasa anobatsira kuvaka kuvimba uye hukama hwakareba. Iwe unogona zvakare kusimudzira aya anotungamira vanofarira kana vanonyoresa kune iyo webinar. Iyi fomati yezvinyorwa zvine gated zvinogona kukwezva mafambiro akanaka zvakare.
Zvemukati zvinopihwa zvakakosha kwazvo parwendo rwevatengi. Izvo zvakakosha kuti uve nezvimwe zvakanaka gated zvemukati zvirikuitwa kuti zviwanikwe kune ako matarisiro ehukama kuvaka uye kutungamira yekurera maitiro.
Tags: b2b kushambadziraeBookgated zvemukatimutungamiri wechizvarwakunyoresaWebinarsvarungu
Madhavi ndeyeCreative Zvemukati Munyori ane 8+ makore echiitiko muB2B indasitiri. Semunyori ane ruzivo zvemukati, chinangwa chake ndechekuwedzera kukosha kumabhizinesi kuburikidza nehunyanzvi hwake hwekunyora zvemukati. Anotarisira kumisikidza bhiriji remitauro pakati petekinoroji nebhizimusi renyika nerudo rwake rwezvakanyorwa. Kunze kwekunyora zvemukati, iye anoda kupenda uye kubika!
Dhijitari Yekuzvibata Dhata: Chakavanzika-Chengetwa Chakavanzika cheKurova Kwakakodzera Chord naGen Z